ပုဇွန်ကပ်သလိပ်အစပ်ကြော်မီနူးအသစ်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်….. - Zeekwat Hot News
June 12, 20190207
ရိုးရိုး “ပုဇွန်ကပ်သလိပ်အစပ်ကြော်” မီနူးကို စားချင်စဖွယ်အရောင်အစင်းရှိ မြင်သူတိုင်း သွားရေယိုသွားစေရမယ့် ပြုလုပ်နည်းကို အလုပ်အားလပ်ရက်မှာ လွယ်ကူစားကောင်းပြီး စားဖူးရုံနဲ့စွဲသွားစေရမယ့် “ပုဇွန်ကပ်သလိပ်အစပ်ကြော်” မီနူးကိုသူများနဲ့မတူ တဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်း ပြုလုပ်နည်း တွေကို ဖေါ်ပြပေးသွားမှာပါ
ကြိတ်ထားသည့်ပုဇွန် ၃၅၀ ဂရမ်
ကြိတ်ထားသည့်ဝက်သား ၁၀၀ ဂရမ်
နံနံပင်အမြစ် ၂-၃ မြစ်
ငြုပ်သီး ၃-၄ တောင့်
ဂျုံမှုန့် ၂ ဇွန်း (ဟင်းခပ်ဇွန်း)
အရသာပြင်ဆော့စ် ၁ ဇွန်း (ဟင်းခပ်ဇွန်း)
ငြုပ်ဆီ ၂ ဇွန်း (ဟင်းခပ်ဇွန်း)
သကြား ၁ ဇွန်း (လဖ္ဘက်ဇွန်း)
ခရုဆီ ၁ ဇွန်း (ဟင်းခပ်ဇွန်း)
ဂျုံမှုန့် ၁ ခွက်
မုန့်ကြွပ်အနှစ် ၁ ခွက်
၁. ငြုပ်သီး နှင့် နံနံပင်အမြစ်တို့ကိုညက်နေအောင်ထောင်းပါ ပြီးလျှင် ကြိတ်ထား သော ၀က်သားနှင့်ပုဇွန်တို့ကို အရသာပြင်ဆော့စ်၊ ငြုပ်ဆီ၊ ခရုဆီ၊ သကြား၊ ဂျုံမှုန့်တို့နှင့်နယ်ပါ ပြီးလျင် ငငြုပ်ကောင်းမှုန့်အနည်းငယ်ဖြူးပြီး မိနစ် ၃၀ ခန့် ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်နှက်ထားပါ
၂. နှက်ထားတဲ့ ပုဇွန်အနှစ်တို့ကို အလုံး၊ အပြား အနေတော်လုံးထားပါ ပြီးလျင် ရောစပ်ထားသည့်ဂျုံနှစ်စိမ်ပြီး မုန့်ကြွပ်ကြော်နှင့်စိမ်လိုက်ပါ
၃. မီးအနည်းငယ်တည်ပြီး ၃-၅ မိနစ်လောက်စောင့်ပြီး ရွှေရောင်သန်းသည်အထိကြော်ပါ
ရိုးရိုး “ပုဇှနကြပသြလိပအြစပကြှြော” မီနူးကို စားခငွစြဖှယအြရောငအြစငြးရှိ မှငသြူတိုငြး သှားရယေိုသှားစရမေယြ့ ပှုလုပနြညြးကို အလုပအြားလပရြကမြှာ လှယကြူစားကောငြးပှီး စားဖူးရုံနဲ့စှဲသှားစရမေယြ့ “ပုဇှနကြပသြလိပအြစပကြှြော” မီနူးကိုသူမွားနဲ့မတူ တဲ့ ပါဝငပြဈစညြး ပှုလုပနြညြး တှကေို ဖေါပြှပေးသှားမှာပါ
ကိတထြားသညြ့ပုဇှနြ ၃၅၀ ဂရမြ
ကှိတထြားသညြ့ဝကသြား ၁၀၀ ဂရမြ
နံနံပငအြမှစြ ၂-၃ မှစြ
ငှုပသြီး ၃-၄ တောငြ့
ဂွုံမှုနြ့ ၂ ဇှနြး (ဟငြးခပဇြှနြး)
အရသာပှငဆြော့စြ ၁ ဇှနြး (ဟငြးခပဇြှနြး)
ငှုပဆြီ ၂ ဇှနြး (ဟငြးခပဇြှနြး)
သကှား ၁ ဇှနြး (လဖျဘကဇြှနြး)
ခရုဆီ ၁ ဇှနြး (ဟငြးခပဇြှနြး)
ဂွုံမှုနြ့ ၁ ခှကြ
မုနြ့ကှပအြနှစြ ၁ ခှကြ
ကှကြဥ ၁ လုံး
၁. ငှုပသြီး နှငြ့ နံနံပငအြမှစတြို့ကိုညကနြအေောငထြောငြးပါ ပှီးလွှငြ ကှိတထြား သော ဝကသြားနှငြ့ပုဇှနတြို့ကို အရသာပှငဆြော့စြ၊ ငှုပဆြီ၊ ခရုဆီ၊ သကှား၊ ဂွုံမှုနြ့တို့နှငြ့နယပြါ ပှီးလငြွ ငငှုပကြောငြးမှုနြ့အနညြးငယဖြှူးပှီး မိနစြ ၃၀ ခနြ့ ရခေဲသတျေတာထဲထညြ့နှကထြားပါ
၂. နှကထြားတဲ့ ပုဇှနအြနှစတြို့ကို အလုံး၊ အပှား အနတေောလြုံးထားပါ ပှီးလငြွ ရောစပထြားသညြ့ဂွုံနှစစြိမပြှီး မုနြ့ကှပကြှောနြှငြ့စိမလြိုကပြါ
၃. မီးအနညြးငယတြညပြှီး ၃-၅ မိနစလြောကစြောငြ့ပှီး ရှရေောငသြနြးသညအြထိကှောပြါ
Ref : Foodtips